पाथीभरा दर्शन गर्न जान चाहनेहरु लागी आयो खुशीको खबर ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/पाथीभरा दर्शन गर्न जान चाहनेहरु लागी आयो खुशीको खबर !
इलाम / इलामबाट धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल ताप्लेजुङको पाथीभरा उडान शुरु गरिने भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गर्दै सिम्रिक एयरले उडान शुरु गर्ने भएको हो ।
फोन नम्बर सोध्न अब १९७ मा फोन गर्न नपर्ने, यस्तो छ उपाय
नेपालमा कोरोनाबाट दिनहुँ ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो, आज मात्रै पोखरामा दुई जनाले गुमाए ज्यान